Ungawasebenzisa njani amanzi emvula | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Nuria | | Uqoqosho lwaseKhaya, Ikhaya eliGreen, Ukusetyenziswa kwakhona
Amanzi emvula aneempawu ezininzi ezenza ukuba zilungele ukusetyenziswa okwahlukeneyo ekhayeni. Ukuba uhlala kwiphondo apho kunethayo kakhulu, unokusebenzisa kwaye qokelela La manzi oza kuwasebenzisa kamva, alula kunokuba kubonakala ngathi, unokubeka nje ibhafu kwipatiyo kwaye uvumele imvula iwe okanye uphucule inkqubo kwaye uqokelele amanzi emvula avela kuwo uphahla kwindlu yakho.
Amanzi emvula awela eluphahleni lwakho anokuhanjiswa iigatha ijongiswe kwisitya esigqunyiweyo ukuze amanzi ungangcolisi, shiya nje umngxuma uwele emseleni. Amanzi aya kufikelela kwitanki elinokuvezwa okanye lingcwatywe, lenziwe ngekhonkrithi okanye iplastikhi okanye ukuhombisa kwaye amandla ayo axhomekeke ekusebenziseni oya kuwunika kunye nesixa semvula esivame ukuna esixekweni sakho. Kuyimfuneko ukubeka isihluzi Ukuqulatha amagqabi kunye nezinye iintsalela eziqinileyo kunye nesinye isixhobo sokucoca kufuneka sithintele ukungena kwezilwanyana.
Kanye kwi idipozithi Kuya kufuneka wenze inethiwekhi ukuze ihanjiswe kwiindawo zendlu apho uyifunayo. Kufanele ukuba ibe sisibonelelo esincedayo kwinethiwekhi yoqobo yasekhaya kodwa akufuneki ixutywe. Xa amanzi etankini ephela, utshintsho luya kuvumela amanzi avela kwinethiwekhi eqhelekileyo ukuba ajikeleze. Uyilo lothungelwano lwamanzi emvula lujolise kwiindawo ezisendlwini apho ufuna ukuthatha khona ithuba, inokuqhutywa Bomba. Kukho iinkampani ezithengisa kwaye zifake esi sixhobo okanye ungazenzela ngokwakho ukuba unolwazi oluthile ngemibhobho yamanzi.
La manzi icocekile, asimahla, akukho lime, kwaye ingqokelela yayo ayibandakanyi inkcitho ebaxiweyo. Ukusetyenziswa kwayo kuhlala kwenzelwe ngasese, umatshini wokuhlamba impahla, ishawa, amanzi okudada, ukucoca yendlu kunye nokwenza eyethu kwigadi (izityalo nemithi) kunye izitiya Usapho lube ngaphezulu ezinzileyo.
Kumaphondo afana neGalicia apho ihlala inetha rhoqo kwaye kuninzi, iintsapho ezininzi zifake iinkqubo zokurisayikilisha amanzi emvula emakhayeni abo, kufezekiswa ukonga Iipesenti ezingama-50 zamanzi okusela, Uncedo kwezoqoqosho lwasekhaya nakwi- ngileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Uqoqosho lwaseKhaya » Ungawasebenzisa njani amanzi emvula
Ndinomdla wokwenza icebo lokucoca ulwelo ngamanzi emvula okuqala